Hatsarana sa habetsahana ? – Eritreritra mandalo
Hatsarana sa habetsahana ?
Apr 21, 2012 bot-jagwar, rakibolana, Wikimedia
Habetsahana sa hatsarana ? Misy ny sasany hilaza hoe aleo hatsarana toa izay habetsahana, ary misy ny sasany milaza «hatsarana ankabetsahana», ary ny sasany “habetsahana anie mandeha amin’ny fanangonambola ihany e” … Ka inona ny tena marina ? Habetsahana sa hatsarana ?…
Velom-panontaniana amin’izany aho ankehitriny satria eo amin’ny Wikibolana eo dia misy adihevitra mikasika ny habetsahana sy ny hatsarana, na marimarina kokoa, ny resaka teny iditra amboarina amin’ny alalaln’ny rôbô ary ireo teny iditra amboarina tanana, izany hoe amin’ny alalan’ny fampiasana ny mpanovan’ilay Wiki fa tsy ny API-ny.
Nanao traikefa aho mikasika ny famoronana votoatiny amin’ny alalaln’ny robo eo amin’ny Wikibolala amin’ny teny malagasy, dia aveo indray teo amin’ny Wikibolana amin’ny teny fijianina ary amin’ny farany, tagalaogy ; ka izao no tena verdict an’izy ity ; tsara ihany ny mampiasa script raha toa ka hampiditra teny anglisy maro dia maro, izany hoe eo amin’ny roa na telo arivo eo ho eo, dia izay ihany ; satria raha manandrana ny handika ny teny hafa ianao, dia misy risque satria mety tsy mitovy ny dikan’ilay teny amin’ny teny anglisy amin’ny teny indonezianina ; jereo fotsiny ny teny star amin’ny teny anglisy, izay azo dikaina hoe «kintana» amin’ny teny malagasy, na «bintang» amin’ny teny indonezianina ; ny dika hafan’i «star» koa anefa dia mety atao hoe «olo-malaza» amin’ny teny malagasy na «pesohor» amin’ny teny indonezianina. Ny olana amin’ilay teny iray mety midika zavatra hafa tsy misy fifandraisana, dia ilay famaritany mety hafangaron’ny milina : lasa «bintang» ohatra ilay «olo-malaza», na lasa «pesohor» ilay «kintana»; tranga tsotra fotsiny ilay nasehoko teto, fa raha ny tena marina dia mety lasa lavitra noho izany ilay olana. Ka raha milanja mahery ny dimy isan-jaton’ny teny iditra ao anaty Wikibolana iray izany olana kely izany, dia mety hametraka olana goavana be ho an’ireo izay mianatra ny teny malagasy ary koa ho an’ny malagasy izay mianatra teny vahiny. Ka izany zavatra izany, na dia iray tokana anatin’ny iray alina aza, dia manimba ny hatsaran’ny rakibolana foana, indrindra indrindra rehefa manakaiky ny iray tapitrisa ny isa tontalin’ny teny iditra.
Tsy afaka miresaka mikasika ny hatsarana izany isika eto amin’ity Wikibolana ity raha toa ka vitsy kely (izany hoe eo amin’ny folompolony eo ny isan’ny lahatsoratra) ny lahatsoratra voasoratra ato. Raha tsy tonga any amin’ny zaton-jatony any ho any ny isan’ny lahatsoratra dia tsy tokony hiadihevitra mikasika ny hatsaran’ny rakipahalalana isika, torak’izany koa ny mikasika ny rakibolana.
Tsy afaka miresaka mikasika ny hatsarana ihany koa anefa isika raha roa na telo fotsiny no isan’ny lahatsoratra, na dia vita tsara dia tsara aza izy ireo. Manomboka mireasaka mikasika ny hatsarana isika, rehefa tonga eo amin’ny roa na telo arivo eo ho eo ny isan’ny teny iditra, ka eo izy azo tombatombanina ny votoatiny. Raha latsak’izay dia kely loatra ny isany.
Ka izao ny olako miaksika ny fanadihadiana ny hatsarana ary ny habetsahana : tia handray anjara eo amin’ny Wikibolana amin’ny teny tsy fantatro aho, eo amin’n efapolo eo ho eo no isan’ny teny iditra ao anatiny ; ireo teny iditra ireo, dia tsy bordel be daholo. Ka raha tia hampitombo azy ianao, dia manao izay ilaina haha-mpandrindra ny tena, dia aveo amin’izay manadio ny votoatiny ao anatin’ilay wiki. Dia aveo amin’izay manomboka mamorona ny teny iditra mbola tsy misy. Azo atao izany, fa anefa mangata-potoana ihany, ary ho an’ireo sasany izay be dia be mihitsy «andrianiny ny fiteniny, ary ampiany ny an’ny hafa». Misy koa ny manana fisainana toa izao «andrianiny ny fiteny ampiasiana indrindra eo amin’ny aterineto, ary avelany hi-demerde ny hafa».
Misy koa ny hafa tia hampitombo ny wiki hafa, anefa vitsy ireo sady kely ny fotoana hananany hanaovana izany, izany hoe ny manao fikarohana mikasika ilay teny, dia aveo mameno ny Wikibolana avy amin’izay fahalalana nangonona izay. Anefa izany mangata-potoana ka eto amin’ny toerana ipetrahako, izany hoe aty Eoropa, ary indrindra indrindra amin’izaho mbola mianatra, dia tsy manam-potoana ny hanaovana izany rehetra izany aho ; koa rehefa manam-potoana, dia manoratra script Python hanaovana ilay asa amin’ny toerako, na dia ratsy kokoa aza ny hatsarany amin’izy nosoratana tamin’ny rôbô, satria mety ahitana hadisoana hafahafa (jereo ihany eo amin’ny pejin-dresako sy ny laogin’ny pejy voafafa), izay azo ahitsiana ihany, ho an’izay tia handray anjara amin’ny alalan’ny fanitsiana… Betsaka ny mpikambana malagasy fantatro tia handray anjara amin’ny alalan’ny fanitsiana ny lahatsoratra, ka eo izy afaka manao izany tsara.
Izaho no anisan’izay olona tia handray anjara be dia be izay anefa tsy misy fotoana. Ka tiako hanan-tombontsoa ny wiki hafa amin’ny fahaizako manamboatra rindrankajy. Izany zavatra izany no anisan’ny nampitombo wiki roa ; wikibolana moa no ankamaroan’izy ireo, fa misy koa ny wikipedia. Wikipedia malagasy, wikibolana malagasy, fijianina ary tagalaogy no nandramako ireo script nosoratako ireo (izay miisa eo amin’ny telo ambin’ny folo teo ho eo), ka mandeha tsara ilay izy, na dia mamoaka hadisoana hafahafa aza. Ary ireo hadisoana izay isaina amam-polony ireo no itsikeran’ny mpikambana hafa an’ny tenako, na dia hoe tsy hanimba an’ilay Wiki no asako voalohany, fa manisy votoatiny, avy amin’ny loharano izay azo trandrahana : Rakibolana an-tranonkala, rakibolana taratasy ary ny Wikibolana hafa (anglisy indrindra indrindra). Ankehitriny
Feb 15, 2014 terakasorotany
Jan 2, 2014 terakasorotany